Ukukhangelwa kweCalifornia Surge njengoko iUS iphinda ivula uKhenketho lwaMazwe ngaMazwe
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » Ukukhangelwa kweCalifornia Surge njengoko iUS iphinda ivula uKhenketho lwaMazwe ngaMazwe
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Ukuthunyelwa ngaphandle kwe-1 kukaCalifornia kukhenketho lwamazwe aphesheya, kwaye kulungele ukubuya umva emva kokuba i-US ibhengeze ixesha lokuvula kwakhona imida yayo kugonyo lweendwendwe. Isibhengezo sikuphembelele ukwanda kokukhangelwa kukhenketho kunye nokubhukisha, kubonisa iintsuku eziqaqambileyo ngaphambili kukhenketho lukarhulumente kunye nezokhenketho.
I-White House ibhengeze nge-20 ka-Septemba ngo-Sep.
Abahambi kwangoko baqala ukukhangela iihambo zokuhambisa iinqwelomoya zaseYurophu kunye neendawo zokubhukisha zokuhamba.
I-British Airways ibike ukonyuka ngama-700% kukhangelo lohambo oluya eLos Angeles, kwaye iSkyscanner yabona ukwanda ngama-54% kutyelelo lwabathengi abafuna ukutyelela i-United States.
I-Expedia Group Media Solutions ixele ukonyuka komdla kukhenketho lweSan Francisco, ngaphezulu kokuphinda-phinda ukugcwala kwetrafikhi kwintsuku enye yokwazisa ngomda.
“ICalifornia ikulungele ukwamkela abahlobo bethu abavela kwihlabathi liphela, kwaye izixeko zethu zilungile ukukhupha ikhaphethi ebomvu ezininzi zininzi kuphela ngaphakathi-Amava aseCalifornia ukufumanisa, ”Ndwendwela uMongameli we-California kunye ne-CEO uCaroline Beteta. "Baninzi kakhulu abantu abafuna indlela yokuphila yaseCalifornia, kwaye silindele ukubona eli shishini ligquma."
Abahambi bamanye amazwe baphakathi kweyona ndwendwe inenzuzo kakhulu eCalifornia: Bahlala ixesha elide kwaye bachitha ngaphezulu, kwaye bahamba phakathi evekini nakumaxesha onyaka aphezulu. Kwi-2019, abatyeleli bamanye amazwe bachitha i-28 yeebhiliyoni zeedola eCalifornia, bebonelela ngobomi kubasebenzi baseCalifornia kunye nengeniso yerhafu ebalulekileyo kuluntu kwilizwe liphela.
ICarlifonia yindawo yokuqala e-United States, kwaye abahambi bamanye amazwe babaluleke kakhulu kurhulumente, ngakumbi kwizixeko ezikhulu zamasango:
ELos Angeles, iindwendwe zamanye amazwe zenza i-56% yayo yonke inkcitho yezokhenketho ngaphambi kobhubhane.
"Isibhengezo sokuba iindwendwe zamanye amazwe ziya kuphinda zikwazi ukutyelela i-United States ngo-Novemba linyathelo eliphambili kwibali laseLos Angeles," utshilo uMongameli wezoKhenketho eLos Angeles kunye ne-CEO u-Adam Burke. "Iindwendwe zamanye amazwe zimele elinye lamacandelo abaluleke kakhulu kwimarike ye-LA - ngowama-2019 kuphela, samkele irekhodi le-7.4 yezigidi zeendwendwe ezivela kwihlabathi liphela. Abatyeleli bamazwe angaphandle abanafuthe nje kuqoqosho, kodwa bakwanenxaxheba kwinkcubeko yethu eyohlukileyo kwaye sinenkcubeko kwaye asizukuvuya ukwamkela aba bahambi babuyele kwiSixeko seengelosi. ”
Kwi-2019, iindwendwe zamanye amazwe zenza i-12% yayo yonke inkcitho yezokhenketho e-Anaheim kunye ne-33% yayo yonke inkcitho yezokhenketho e-Orange County.
"Nge-Orange County yamkela i-4.6 yezigidi zabakhenkethi bamazwe aphesheya kwi-2019, igxininisa amandla oqoqosho lokuhamba kumazwe aphesheya kunye nendima eza kuyidlala ekubuyiseni uqoqosho lwase-Anaheim," utshilo uJunior Tauvaa, iGosa eliyiNtloko lezeNtengiso, Ndwendwela iAnaheim. "Ikhaya kwiipaki ezikumgangatho wehlabathi kunye nokuthenga, iAnaheim kunye neOrange County ziya kuqhubeka nokuba ngumtsalane oqinileyo kubakhenkethi bamanye amazwe."
IZIPRILI EZIKHULU ZEPALM
KwiGreater Palm Springs, abatyeleli bamanye amazwe babala phantse i-10% yayo yonke inkcitho yezokhenketho ngaphambi kobhubhane, okanye ngaphezulu kwesiqingatha sezigidi zeedola ngo-2019.
"Sikulungele kwaye sinemincili ukwamkela ngokukhuselekileyo iindwendwe zamanye amazwe," utshilo uMongameli kunye neCEO yaseGreater Palm Springs. “Ngokubuya kwemisitho yethu yokutyikitya-ukusukela kwiveki yale mihla, umculo kunye nemibhiyozo yemidlalo bhanyabhanya ukuya kwimidlalo efana neBNP Paribas Open, kunye neehotele ezininzi neendawo zokuchithela iiholide ezininzi kutshanje, alikaze lixesha elingcono lokundwendwela iGreater Palm Springs.”
E-San Diego, iindwendwe zamanye amazwe zenza i-24% yayo yonke inkcitho yezokhenketho ngaphambi kobhubhane.
"Siyazi ukuba kubaluleke kangakanani ukuhamba kwamazwe ngamazwe kwimpilo yonke yoqoqosho lwezokhenketho lwaseSan Diego, kwaye siyazi ukuba abahambi bamazwe ngamazwe bayakhwaza babuyele eSan Diego," kusho uMongameli weGosa lezoKhenketho eSan Diego noJulie Coker. “Ngapha koko, iBritish Airlines ibisandula ukubhengeza ukuba iyaqala kwakhona inkonzo yayo engapheliyo phakathi kweHeathrow Airport eLondon naseSan Diego International Airport ngenxa yesicelo sokungena. Ngelixa isenendlela ende ekufuneka siyithathile ukubuyela kwinani lethu laphambi kobhubhane, amanani abakhweli bomoya bamazwe aphesheya aqhubeka nokunyuka kwaye ayenyuke ngaphezulu kwe-140% ngo-Agasti ukusuka kunyaka ophelileyo. ”
E-San Francisco, iindwendwe zamanye amazwe zenza i-62% yayo yonke inkcitho yezokhenketho ngaphambi kobhubhane.
"Ukwanda komdla ochazwe ngamaqabane ethu kwezohambo e-UK, eJamani, eFrance nase-India kulandela isibhengezo seWhite House sisibonakaliso esamkelekileyo, esihle sonyaka ozayo wobusika," utshilo uJoe D'Alessandro, umongameli kunye ne-CEO yoSan Francisco Travel Association . "Abantu bonwabile ukutyelela kunye nokubona indawo entle yesiko lethu elihle, inkcubeko kunye neminyhadala, kwaye asinakulinda ukubamkela."
Amava amnandi eSan Francisco kunye nokwamkela iyantlukwano kulindele iindwendwe, kunye nezinto ezintsha ezinomtsalane, iihotele kunye neeresityu ezivulekileyo kwiinyanga ezili-18 ezidlulileyo. Indawo yokutyela yesixeko itshintshiwe kukunyuka kweenketho zealfresco ngoku ekubeni “iipaki” zisisigxina.
Ishedyuli epakishwe ngeziganeko kunye nemiboniso ibandakanya "Khanyisa i-SF," umnyhadala wokukhanya wobugcisa weenyanga; "San San othandekayo," i-ode entsha ye-acrobatic eya eSan Francisco eClub Fugazi, indawo eyayisakuba yindawo eyindumasi “yeBlank Blanket yaseBhabheli,” kunye ne "BratPack," amava omdlalo weqonga weqonga obhiyozela imiboniso bhanyabhanya ye-80's eyaboniswa UFeinstein kwiNikko.